Akụkọ - Gini bu Ola diamond?
N’okwu ndị kachasị mfe, ola diamond a tụrụ atụ bụ dayamọnd nke ndị mmadụ mere kama ịkọpụta ya n’ụwa. Ọ bụrụ n ’ọ dị mfe, ị nwere ike iju ihe kpatara ederede niile ji nọrọ n’okpuru ahịrịokwu a. Ihe mgbagwoju anya bilitere n'eziokwu na ejirila otutu okwu di iche iche kọwaa diamonds toro eto na nwanne nne ha, ọ bụghị mmadụ niile na-eji okwu ndị a eme ihe n'otu ụzọ ahụ. Yabụ, ka anyị bido n'okwu ụfọdụ.
Sịntetik. Ghọta okwu a nke ọma bụ isi ihe na-emeghe ajụjụ a dum. Sịntetik nwere ike ịpụta arụ ma ọ bụ adịgboroja. Sịntetik nwekwara ike ịpụta aka mmadụ, depụtaghachiri, nke mezuru, ma ọ bụdị i imomi ya. Ma, n’okwu a, gịnị ka anyị na-ekwu mgbe anyị na-ekwu “synthetic diamond”?
Na ụwa gemological, sịntetik bụ okwu ọrụ aka dị ukwuu. Mgbe ị na-ekwu okwu na teknụzụ, ọla bara uru bụ kristal nke mmadụ mere na otu kristal na ngwakọta kemịkalụ dị ka mkpịsị akpọrọ nke a na-ekepụta. Ya mere, "diamond nwere sịntetik" nwere otu ihe ahụ kristal na ihe ndị mejupụtara dị ka diamond nkịtị. A pụghị ikwu otu ihe ahụ banyere ọtụtụ nitationomi ma ọ bụ nkume ndị adịgboroja na-abụkarị, na-ezighi ezi, kọwara dị ka dayamọnd sịntetik. Nkọwahie a agbagọgoro ihe okwu ahụ bụ "sịntetik" pụtara, ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị na-emepụta diamonds mmadụ ji ahọrọ okwu "lab toro eto" karịa "sịntetik."
Iji nwee ekele maka nke a n'ụzọ zuru oke, ọ na-enyere aka ịghọta ntakịrị ihe gbasara etu esi eme akwa diamond. E nwere usoro abụọ iji wee too diamonds. Onye mbu na nke ochie bụ Usoro Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe (HPHT). Usoro a na-amalite site na mkpụrụ nke ihe diamond ma na-etolite oke diamond dị ka okike na-eme n'okpuru nrụgide dị elu na ọnọdụ okpomọkụ.
Zọ kachasị ọhụrụ iji too diamonds synthetic bụ usoro Chemical Vapor Deposition (CVD). N'ime usoro CVD, ikuku jupụtara na ikuku carbon. A na-amịpụta mkpụrụ carbon site na gas ndị ọzọ wee debe ya na wafer nke diamond crystal nke na-eme ka ngwongwo kristal ahụ dị ka nnukwu nkume ahụ na-etolite oyi akwa site na oyi akwa. Nwere ike ịmụtakwu banyere otú ụlọ lab toro diamonds si mee site na isi edemede anyị na usoro dị iche iche. Ihe dị mkpa maka ugbu a bụ na usoro abụọ a bụ teknụzụ dị elu nke na-emepụta kristal nwere otu kemịkal kemịkalụ na ngwa anya dị ka ola diamond. Ugbu a, ka anyị jiri ụlọ nyocha toro lekọtara ọnụ na ụfọdụ ihe bara nnukwu uru ị nwere ike ịnụ.
Glọ nyocha ndị toro eto na-atụnyere Diamond Simulants
Kedu mgbe ihe sịntetik na-abụghị sịntetik? Azịza ya bụ mgbe ọ bụ simulant. Simulants bụ bara nnukwu uru nke yiri ezigbo, okike dị egwu mana ọ bụ n’ezie ihe ọzọ. Ya mere, sapphire doro anya ma ọ bụ na-acha ọcha nwere ike ịbụ simulant diamond n'ihi na ọ dị ka dayamọnd. Sapphire ọcha ahụ nwere ike ịbụ ihe okike ma ọ bụ, nke a bụ ihe aghụghọ, sapphire synthetic. Igodo nke nghọta nke okwu a abụghị otu esi eme mkpuru (eke na sịntetik), mana na ọ bụ dochie anya dị ka ọla ọzọ. Yabụ, anyị nwere ike ịsị na sapphire na-acha ọcha nke mmadụ bụ "sapphire synthetic" ma ọ bụ na enwere ike iji ya dị ka "simulant diamond," mana ọ ga-ezighi ezi ịsị na ọ bụ "diamond synthetic" n'ihi na ọ naghị nwee otu ihe owuwu kemikal dika diamond.
Sapphire ọcha, nke a na-ere ahịa ma gosipụta dị ka safaya ọcha, bụ sapphire. Ma, ọ bụrụ na ejiri ya n'ọnọdụ nke diamond, mgbe ahụ ọ bụ simulant diamond. Ihe bara uru di egwu, ozo, na-anwa iicomi mkpuru ihe ozo, ma oburu na egosighi ha nke oma dika ihe eji eme ha, ha bu ndi nzuzu. Sapphire ọcha abụghị, site na okike, adịgboroja (n'eziokwu ọ bụ ọla mara mma ma baa ezigbo uru). Ma ọ bụrụ na a na-ere ya dị ka dayamọnd, ọ na-aghọ adịgboroja. Imirikiti simulants ndị dị egwu na-anwa i diamondomi diamond, ma e nwekwara simulants maka nkume ndị ọzọ bara uru (sapphires, rubies, wdg).
Nke a bụ ụfọdụ n'ime simulants diamond mara mma.
Sịntetik Rutile ẹkenam ke mbubreyo 1940 na-eji dị ka ihe mbụ diamond simulant.
Ihe na-esote mmadụ na-egwuri egwu dayamọnd bụ Strontium Titanate. Ihe a ghọrọ ihe simulant a ma ama na 1950s.
N'afọ ndị 1960 wetara mmepe nke simulants abụọ: Yttrium Aluminium Garnet (YAG) na Gadolinium Gallium Garnet (GGG). Ha abụọ bụ simulants nke diamond mere. Ọ dị mkpa ikwughachi ebe a na naanị n'ihi na enwere ike iji ihe dị ka simulant diamond na-emeghị ka ọ bụrụ "adịgboroja" ma ọ bụ ihe ọjọọ. Dịka ọmụmaatụ, YAG bụ kristal bara ezigbo uru nke dị n'obi anyị laser welder.
Nkume diamond kachasị ewu ewu ruo taa bụ sịntetik Cubic Zirconia (CZ). Ọ dị ọnụ ala iji mepụta ma na-egbukepụ egbukepụ nke ukwuu. Ọ bụ nnukwu ihe atụ nke nkume a na-emepụta sịntetik nke simulant. A na-akpọ CZs ọtụtụ mgbe, na-ezighi ezi, dịka dayamọnd sịntetik.
Synthetic Moissanite na-emekwa ụfọdụ mgbagwoju anya. Ọ bụ ihe mmadụ mebere, nke nwere nnukwu ihe nwere ihe nwere daịamọnd. Dịka ọmụmaatụ, diamonds dị mma nke ukwuu n'ịfefe ọkụ, yana ya na Moissanite. Nke a dị mkpa n'ihi na ndị na-ahụkarị diamond testers na-eji mgbasa mgbasa iji nwalee ma ọ bụrụ na nnukwu nkume bụ diamond. Agbanyeghị, Moissanite nwere usoro kemịkal dị iche iche karịa diamond na ngwa anya dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, Moissanite na-emegharị okpukpu abụọ ebe dayamọnd bụ otu mkpụrụ.
Ebe ọ bụ na Moissanite na-anwale dị ka diamond (n'ihi ya okpomọkụ dispersal Njirimara), ndị mmadụ na-eche na ọ bụ diamond ma ọ bụ sịntetik diamond. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na o nweghị otu ihe owuwu kristal ahụ ma ọ bụ ihe mejupụtara chemical nke diamond, ọ bụghị ihe a na-emepụta sịntetik. Moissanite bụ simulant diamond.
Ọ nwere ike ịbụ ihe doro anya n'oge a ihe kpatara okwu a bụ "sịntetik" ka o jiri gbagwojuru anya n'okwu a. Na Moissanite anyị nwere ihe atụ dị egwu nke na-ele ma na-eme ọtụtụ ihe dịka diamond mana ekwesighi ịkọwa ya dị ka "diamond nwere ihe atụ." N'ihi nke a, yana ọtụtụ ụlọ ọrụ ọla, anyị na-ejikarị okwu ahụ bụ "labልማ diamond" na-ezo aka na ezigbo sịntetik sịntetik nke na-ekerịta otu kemịkal kemịkalụ dị ka diamond okike, anyị na-agbanahụ iwepụ okwu ahụ dayamọnd ”nyere ole ọgba aghara ọ nwere ike ịmepụta.
E nwere ihe ọzọ na simulant diamond na -emepụta nnukwu ọgba aghara. Diamond ntekwasa Cubic Zirconia (CZ) bara nnukwu uru na-emepụta site na iji otu Chemical Alụlụụ Deposition (CVD) technology na-eji na-emepụta lab toro diamonds. Ejiri akwa CZ mejupụtara diamond, a na-agbakwunye akwa dị ezigbo mkpa nke ihe eji emepụta ihe diamond n'elu CZ. Ngwongwo diamond nke nanocrystalline bụ naanị ihe dị ka iri atọ ruo iri ise. Nke ahụ bụ ihe dị ka mkpụrụedemede 30 ruo 50 dị arọ ma ọ bụ 0.00003mm. Ma ọ bụ, ekwesịrị ikwu ya, dị ezigbo mkpa. CVD diamond ntekwasa Cubic Zirconia abụghị sịntetik diamonds. A na-enye ha otuto dị iche iche nke Cubic Zirconia naanị. Ha anaghị enwe otu isi ike ma ọ bụ ụdị kristal nke dayamọnd. Dị ka ụfọdụ anya iko, CVD diamond ntekwasa Cubic Zirconia nwere ezigbo mkpa diamond mkpuchi naanị. Otú ọ dị, nke a anaghị egbochi ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-enweghị ụkpụrụ ịkpọ ha diamonds sịntetik. Ugbu a, ị maara nke ọma.
Glọ nyocha ndị toro eto na-atụnyere na Diamond
Yabụ, ugbu a anyị matarala ụlọ diamond toro eto abụghị, oge eruola ka anyị kwuo maka ihe ha bụ. Kedu ka ụlọ nyocha toro lekọtara si tunyere okike diamond? Azịza ya dabere na nkọwa nke sịntetik. Dị ka anyị mụtara, a synthetic diamond nwere otu crystal Ọdịdị na chemical mejupụtara dị ka a eke diamond. Ya mere, ha dị ka nkume dị egwu. Ha na-achakwa otu ihe. Ha nwere otu isi ike. N'akụkụ, lab diamond toro eto na-ele anya ma na-eme dị ka okike okike.
Esemokwu dị iche n’etiti eke na ụlọ nyocha etolite diamond sitere na otu esi mee ya. Grownlọ nyocha ndị toro eto na-arụ ọrụ n'ime ụlọ nyocha ka emepụtara diamonds dị n'ụwa. Nature abụghị ebe a na-achịkwa, enweghị mmachi, yana usoro dị iche iche na-adịgasị iche iche. Ya mere, nsonaazụ ya ezughị oke. E nwere ọtụtụ ụdị nke inclusions na bughi ihe ịrịba ama na ọdịdị mere a nyere mkpuru.
Grownlọ nyocha ndị toro eto, na aka nke ọzọ, emere ya na gburugburu ebe a na-ejikwa ya. Ha nwere ihe ịrịba ama nke usoro nchịkwa nke na-adịghị ka okike. Ọzọkwa, mbọ ụmụ mmadụ na-agba ezughi oke ma ha na-ahapụ ihe ọghọm na akara aka ha nke ụmụ mmadụ mere. Ofdị nke inclusions na aghụghọ ọdịiche dị iche iche na crystal Ọdịdị bụ otu n'ime ndị isi ụzọ ọdịiche dị n'etiti ụlọ nyocha toro na eke diamonds. I nwekwara ike ịmụtakwu banyere esi mara ma diamond ọ bụ lab ka toro ma obu ihe sitere na isi okwu anyi banyere okwu a.
FJU Udi: Lablọ nyocha toro Diamonds